Madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey. oo goordhow xilka laga qaaday – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMadaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey. oo goordhow xilka laga qaaday
Madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey. oo goordhow xilka laga qaaday
30/09/2017 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Wararka hadda naga soo gaarayo Magaalada Cadaado ee Xarunta KMG Maamulka Galmudug ayaa sheegayo in xilkii laga qaaday Madaxweyne kuxigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey.
Sida noo xaqiijiyeen goobjogayaal ku sugan magaalada Cadaado waxaa shirka ay qabteen Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug soo xaadiray 52 Xildhibaan, wuxuuna Madaxweyne Xaaf ka codsaday inay xilka ka qaadaan madaxweyne kuxigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Carabey.
Sida wararku sheegayaan lana sugayo in waraaq rasmi ah lasoo saaro, waxaana u codeeyey in xilka laga qaado madaxweyne kuxigeenka dhammaan 52-dii Xildhibaan ee soo xiray Shirka kuwaas oo sheegay inaysan u dulqaadan doonin in la dumiyo Maamulka Galmudug.
AKHRISO:- Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug oo xilka ka qaaday Gudoomiye Cali Gacal Casir
Al-shabaab oo madaafic ku garaacday magaada Baydhabo ee gobolka Baay